Knowledge Archives - Shwe Khit Online TV
October 21, 2021 Yan 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မုန့်ပဲသရေစာတွေကို စားရင် ရနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ကောင်းကျိုးလေးတွေကို ရမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ဖတ်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ဗိုက်တာမင် ဓာတ် ပိုရနိုင်ခြင်း ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ သရေစာတွေဟာ ဗီတာမင်ဓာတ်ကို ပိုမိုရရှိနိုင်အောင် ကူညီနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ပြောထားပါတယ် ။ လူတွေ အတွက် တစ်နေ့ကို အစာ ( […]
October 18, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာ မသင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူသားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်မှာ ဘယ်လို ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေ ရှိမလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို အတူတူ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အလယ်ဗဟိုဟာ နေရဲ့ အပူချိန်နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ပထမ […]
October 15, 2021 Yan 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး Elon Musk နဲ့ ပတ်သတ်လို့ လူတွေ သိပ်မသိကြသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး Elon Musk ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အချက်က ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ….shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Tesla စက်ရုံမှာပဲ အိပ်လေ့ရှိတဲ့ Elom […]
October 11, 2021 Shwe Khit Online TV 0
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်အထိ နိုင်ငံပေါင်း (၄၀) လောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာစစ်လိုမျိုး ကြီးကျယ်တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ၊ ဗြိတိသျှအင်ပါယာပြိုကွဲတာမျိုးတွေ နဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံလို နိုင်ငံကြီးပြိုကွဲခဲ့တာတွေ စတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းက (၂၀၀) လောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ဒီလိုနိုင်ငံတွေထဲက အားလုံးနီးပါးကတော့ နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရရုံးတွေရုံးစိုက်ရာနေရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွေ စီးပွားရေးအချက်အချာကျတဲ့မြို့ကို နိုင်ငံရဲ့ အဓိကမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေကတော့ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့တော်ရယ်လို့မရှိဘဲ အဓိကမြို့တော် […]
အာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိရိစ္ဆာန် ( ၅ ) မျိုး
October 8, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိရိစ္ဆာန်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အာကာသထဲကို ဘယ်အကောင်လေးတွေက ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ မျောက်နဲ့ မျောက်ဝံများ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရ အာကာသ ယာဉ်ထဲ လိုက်ပါခဲ့တဲ့ မျောက် နဲ့ မျောက်ဝံ အကောင်ရေပေါင်းဟာ ( ၃၂ ) […]
တချိန်က အရမ်းစည်ကားခဲ့ပေမယ့် ရုတ်တရက် လူသူကင်းမဲ့သွားတဲ့ မြို့ပျက် (၇) မြို့
October 3, 2021 Shwe Khit Online TV 0
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့တွေဟာ တစ်ချိန်က ပျားပန်းခပ် စည်ကားခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာ နေထိုင်သူကင်းမယ့်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် ဆောင်းပါးလေးမှာပါဝင်မယ့် မြို့လေး (၇) မြို့ကတော့ မြို့နေလူထုက စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကျိန်စာတွေ၊ ဝိညာဉ်တွေခြောက်လှန့်မှု တွေနဲ့သာ ခြောက်ခြားဖွယ်ကျန်ခဲ့ရတဲ့ မြို့လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ၇။ ပိရမစ်ဒန် (Pyramiden) – နော်ဝေ ပိရမစ်ဒန် (Pyramiden) ဒေသကတော့ ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး အာတိတ်စက်ဝန်း နားမှာရှိတဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံ၊ ရှဗားဗာ့ […]
အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး လူအတော်များများ အထင်မှားနေကြတဲ့ အကောင်များ
October 1, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး လူအတော်များများ အထင်မှားနေကြတဲ့ အကောင်များ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဖော်ပြမယ့် အကောင်တွေဟာ တစ်ကယ့် အပြင်မှာတော့ လူတွေကို အန္တရာယ်မပြုပဲ နေတတ်တာမို့လို့ ဘယ်လို အကောင်မျိုးလေးတွေ ပါမလဲဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ပါးစပ်ပြဲ ငါးမန်း ပါးစပ်ပြဲ ငါးမန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူ အတော်များများ […]
September 26, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာတော့ အာကာသထဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နက်ရှိုင်း ကျယ်ပြောလှတဲ့ အာကာသထဲမှာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ထူးဆန်းတဲ့ ရေဒီယို ဆင်ဂနယ် (၂၀၀၇ ) ခုနှစ်တုန်းက သုတေသီတွေဟာ မီလီစက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ultrabright ရေဒီယို ဆင်ဂနယ် တစ်ခုကို […]
September 23, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးမှာကတော့ ဘာမြူဒါတြိဂံ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် အချက်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထူးဆန်းမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီ ဘာမြူဒါ တြိဂံ တစ်ဝိုက်ထဲမှာ ဘယ်လို အချက်တွေ ရှိမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ဘာမြူဒါ မီးတီကောင် ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးချင်တာကတော့ ဘာမြူဒါ မီးတီကောင်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် […]
September 18, 2021 Shwe Khit Online TV 0
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပေါများဆုံး အင်းဆက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် ရောဂါဘယတွေသယ်ဆောင်လာပြီး လူသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကို ရန်ရှာနေတာကတော့ ခြင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ဒီလိုမျိုး စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ကောင်းပြီး အန္တရာယ်လည်းများတဲ့ ခြင်တွေကို နှိမ်နင်းတဲ့နည်း အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ မွှေးပျံ့တဲ့ရနံလေးတွေနဲ့ ခြင်တွေကို အနားမလာနိုင်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ၁။ သစ်ခွပန်း အမှုန့်အခြေအနေရောက်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ သစ်ခွပန်း (၁) ဆ နဲ့ Baby Lotion (၁၀) ဆ ကိုရောစပ်ပြီး ရေမှာပျော်ဝင်အောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ […]